Indawo yokudlela "Gambrinus": incazelo, amanani, ukubuyekezwa
Kuyini yokudlela "Gambrinus"? Lena enye yezinhlobo ezingu-izikhungo odumile inethiwekhi eMoscow. Kulezi zokudlela inikeza izivakashi Ukukhetha eziningi besizulu. Futhi-ke, okunezinhlobonhlobo elikhulu appetizers ku imenyu, kuhlangene ethandwa kakhulu ephansi utshwala iziphuzo emhlabeni.
I "Gambrinus" lokuqala lavulwa ngo-2007. Sebenza isikhungo esekelwe yaseYurophu. Naphezu kweqiniso lokuthi inhlokodolobha babenegunya elikhulu eateries nemigoqo abathandi ubhiya, olufana "Gambrinus" (yokudlela) eMoscow ukunikela namanje bahluleka eliningi eyanele. Ukukhetha elikhulu zonke isiphuzo zakho ozithandayo, ingaphakathi engavamile, high cuisine - konke lokhu ukuvumele sha ukunqoba uthando izivakashi nezakhamuzi yenhloko-dolobha. Futhi, ngenxa yalokho, inkampani waqala ukwandisa.
Namuhla izikhungo ezifana enhlokodolobha yase eziyisithupha. Kulabo abaye akakavakasheli yokudlela "Gambrinus", ngezansi uhlu lwamakheli. Kusukela kulolu hlu, ungakhetha luhlobo eliseduze. Ngakho, sebeseduze amakheli alandelayo:
ul.Sergiya Radonezhsky 8;
Zubovsky Boulevard, 13s2;
ul.1, uVladimir I, 9;
Vernadsky ithemba, 16.
"Gambrinus" - yokudlela, imenyu zazo ukwethula besizulu engamashumi amabili nambili. Ngisho isivakashi olindele kunazo ngeke udumazeke. Phela, in the ezahlukene ngayinye izikhungo kwalesi inethiwekhi abakhiqizi Beer lushih.
iziphuzo German amelwa amagama ezifana "Mayzels Weiss," "Frantsiskaner", "Spaten". Belgyskie - "Hagarden", "Belle-Vue Creek", "Petrus Red Edge". Futhi, ekugcineni, lesi siphuzo main obubusa nodumo okuthiwa yokudlela - "Gambrinus" - lifanelwe Izibuyekezo rave. Izindleko zalesi ubhiya Czech esithandwayo ruble 180 (30 ml). German "Mayzels Weiss" izobiza ruble 230 ingilazi ngayinye. "Hagarden" - ruble 250.
I "Gambrinus" imenyu likhona futhi ekubumbeni, futhi ubhiya Trappist. Ukuze ladies kukhona izinhlobo eziningana Belgian izithelo neziphuzo. Nokho, ezinye kakhulu kungekho onendaba kukhethwa ubhiya, abanikazi yokudlela, futhi iphupho ngeke kukusize ngalutho khona okusezingeni eliphezulu lesikhungo, uma kungaphumeleli e umpheki ehloniphekile.
Phakathi ukudla okushisayo kanye Ungadla Izivakashi isehlane ayi assorted nemvu. Phela lezi zinto kwimenyu athandwa kakhulu phakathi izivakashi, "Gambrinus". Izindleko ukusikeka ruble 450. yokubeka wewundlu, okuyinto wakhonza namazambane ezintsha nobhontshisi, izindleko, yebo, ezibizayo. Izindleko zalesi isidlo - ruble 1550.
Ukuze ubhiya Ezivamile ukuncoma ukuzama ingulube izimbambo, quesadillas nge iwundlu, camembert ethosiwe, kanye izitsha ezivela nezimfanzi. Ukukhethwa Ungadla esishisayo ngesikhathi "Gambrinus", njengoba kunoma iyiphi enye ubhiya ensimini yase lelizinga ngezindlela ezihlukahlukene. Intengo isilinganiso ukudla kulesi sigaba - ruble 300.
Indawo yokudlela "Gambrinus" wavakashela hhayi kuphela abalandeli ubhiya eqotho inyama izitsha. Kule menu yokudlela inikeza Ukukhetha eziningi zotshwala. Yiqiniso, kukhona nama-dessert. Intengo edumile ikhekhe "khekhe" kuyinto ruble 390.
Ngeshwa, ngeke yini kube khona ngaphandle spoon yomsizi netiyela. Guest ngokuvakashela yokudlela "Gambrinus" omuhle uma kuziwa izinga ubhiya nokudla. Kodwa uma kungenjalo lokhu kwenzeka nge izinga lenkonzo. Oweta nazi ngempela abanamusa futhi akazange abonise ukunakwa kakhulu izivakashi. Futhi kule convergent, maye, iningi izivakashi.
Summer masimu lokuphekiwe eMoscow (isithombe)
Bar "Coyote Ugly" (Petersburg, eRussia): Uhlolojikelele, amamenyu kanye nokubuyekeza
"Inkomishi Ideal": elimnandi ikhofi kanye umbono omuhle komuzi
Yini okufanele ibe yokudlela UMichelin-inkanyezi?
Claude Monet - yokudlela nge touch French
Ngazi kanjani ukuthi kukhona umonakalo kimi: indlela ukucacisa
Gravitsapu Ngokusho Einstein Effect
Amasu ngokomqondo kanye lapho eqasha abantu. Interview, ucwaningo, ukuhlola
Baby ingubo. ubuthongo iphilile ingane yakho
Darwin (e-Australia): idolobha kokuqhathanisa
Ngamunye sokwenziwa ocular: i Uhlolojikelele, incazelo, uhlobo kanye nokubuyekeza
Yini ukukhetha PC yakho ye-Linux?
Izimiso kanye namagugu liberalism
Indlela ukukhetha iwayini elibomvu elimnandi? Yini umkhiqizo ukuthenga iwayini semi amnandi elibomvu?